Mpanamboatra sy mpamatsy haingam-pandeha avo lenta China Bricmaker
Ny roller dia mifangaro amin'ny hamafana ambonin'ny HRC50 nikela avo, molybdenum, varahina sy vanadium fitaovana, lanja mavesatra kokoa, ary zoro fihinana kely kokoa. Izy io dia afaka mamintina sy mametafeta ireo akora, manadio ireo akora misy vokatra avo kokoa, manatsara ny plastika, mampihena ny tahan'ny fako ary miantoka ny kalitaon'ny biriky poakaty.
Izy io dia mety amin'ny akora fototra izay ambanin'ny hakarina antonony (hamafin'ny Platins 4-5), toy ny fotaka an-tendrombohitra sy ny fanotofana tany.
asa Famotehana ny akora simika
Fitsipika miasa 2-Fanorotoroana roller
Banga Roller Double
F2 taorian 'i jkara-drariny
Fandidiana sy fikojakojana
a) Alohan'ny hanombohana ny fitaovana dia tokony hojeren'ny mpandraharaha tsara ireo fatotra isan-karazany, izay tsy afaka manana faritra malalaka na very. Ireo faritra mihodina dia hanamarina tsara fa tsy misy fisehoan-javatra manakana.
b) Ny milina dia afaka mametraka asa tsy misy enta-mavesatra aorian'ny fanaraha-maso izay faritra miasa rehetra dia ara-dalàna. Tokony ao anatin'ny 2 ora aorian'ny fiasan'ny entana izany. Isaky ny manomboka indray dia tsy tokony misy entana manomboka aloha, aorian'ny hahatratrarana ny hafainganam-pandeha ary avy eo apetraka amin'ny asa fandefasana.
c) Noho ny tsy fitovizan'ny homogeneity an'ny fitaovana, ny fihozongozona ny masinina iray manontolo dia mety hiteraka fisehoan-javatra malalaka, koa aza hadino ny mijery azy matetika.
d) Na dia avo kokoa aza ny setrin'ny roller, dia tokony hisoroka ny vatolampy mahery koa isika, ny votoatin'ny vy dia afangaro amin'ny fanokafana sakafo, vokatr'izany fahasimbana eo amin'ny setroka izany.
e) Rehefa tsindry mihodina mihoatra ny 132884.8N ny tsindry mihatra, tapaka ny tsimatra fiarovana amin'ny andrim-piantohana amin'ny lafiny roa mba hiarovana ny fitaovana. Raha mbola manolo ny boaty azo antoka dia afaka manohy miasa. Raha mihoatra ny 66442.4N ny tsindry kodiarana iray, dia ho tapaka koa ny tsimatra fiarovana.
f) Ny menaka manitra lubricating calcium (ZFG-1) dia nampidirina an-tsokosoko nandritra ny fanangonana farany ny fitaovana, ary mila soloina na manampy ny menaka aorian'ny fihazakazahana 10-20 andro.
g) Ny lafiny roa amin'ny fitondra fanamoriana azo ovaina dia tokony hadio amin'ny fotoana rehetra, ary ampio menaka 20 # tsy tapaka (1time / shift), mba ahafahan'ny horonan-tsipika azo ovaina mihetsika manaraka ny lakilen'ny torolàlana miaraka amin'ny hery fanosehana sy ny herin'ny lohataona, mampitombo ny fahaizan'ny mamotika.
h) Fanamboarana akanjo vita amin'ny peratra: esory ny saron-tava miaro amin'ny lafiny roa amin'ny vatana, apetraho ao anaty chassis amin'ny alàlan'ny tanan-tànana ny fitaovana fikosoham-bary, fantsom-pametahana, roller mihodina (<10 r / min dia mety, afaka mampiasa reducer hafainganana ambony).
i) Mifindra tanana, manamboatra ny toerana mifanaraka amin'izany, manodina ny napetraka amin'ny roller.
Teo aloha: Crusher Hammer azo ovaina
Manaraka: Roller fanesorana vato mihintsy
Crusher Hammer azo ovaina